Kooxo hubeysan oo dilay Maxamed Cabdullaahi | Banaadir Times
HomeUncategorisedKooxo hubeysan oo dilay Maxamed Cabdullaahi
Kooxo hubeysan oo dilay Maxamed Cabdullaahi
Alle ha u Naxariistee Kooxo Burcad ah uu hubeysan ayaa waxaa gudaha dalka Koonfur Afrika ay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa Soomaalida Ganacsi ahaan u tegay dalkaas, iyaga oo doonayay inay dhac u geystaan.
Muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaanay ( Farmaajo) kuna magac ah Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya xilli uu ku sugnaa Tuulada Khayelitsha oo katirsan Magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika.
Mid kamid ah Soomalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in muwaadinka Soomaaliyeed xilliga la dilayay loogu tegay Dukankiisa, isla markaana mid kamid ah Burcadii dilka geystay isla goobta lagu toogto.
Ciidamo ka tirsan Booliska Koonfur Afrika ayaa tegay halka dilka uu ka dhacay, iyaga oo wada baaritaano la xiriira sida ay wax u dhaceen, iyaga oo sidoo kale Goobta ka qaaday meydadka labada Ruux uu mid kamid ah yahay Muwaadinka Soomaaliyeed ee la dilay.
Beegsiga Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa kordhay bilihii la soo dhaafay waxaa jiray dibadbaxyo ay dhigayeen qaar kamid ah Soomaalida ku nool dalkaas, iyaga oo dalbanayay in wax laga qabto
Previous articleFarmaajo “Madaxweyne Idriss Deby Wuxuu ahaa Nin dowladeed oo dhab ah”
Next articleUrur Goboleedka IGAD oo ku baaqay in dib loogu laabto wada-hadallada Afisiyooni